Fanadihadian’ny CIES : “Lafo vidy” indrindra i Neymar, 210,7 tapitrisa euros | NewsMada
Fanadihadian’ny CIES : “Lafo vidy” indrindra i Neymar, 210,7 tapitrisa euros
Tsy fandraharahana maivana ny baolina kitra any Eoropa. Volabe no miasa ao anatin’io sehatra iray io ahitana fampiasam-bola isan-karazany ataon’ireo orinasa goavana manana ny toerany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Vidin-dafo, tsy zakan’ny tetibolan’ny kely vola ireo mpilalao matihanina any Eoropa.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny CIES* farany, ilay Breziliana ao amin’ny FC Barcelone, i Neymar da Silva Santos, 25 taona, izao no lohany « lafo indrindra » amin’ny mpilalao baolina kitra matihanina maneran-tany. 210,7 tapitrisa euros ny vidin’izany mpilalao izany. Manaraka azy, i Dele Alli, ao amin’ny Tottenham any Angletera, 155,1 tapitrisa euros. Izy no tanora indrindra ao amin’ireo Top 10, 21 taona. Fahatelo, i Harry Kane, ao amin’ny Tottenham ihany, 153,6 tapitrisa euros. Fahefatra, vao ahitana an’i Messi, 151,7 tapitrisa euros, ao amin’ny FC Barça. Nitana laharana voalohany matetika ity mpilalao ity teo aloha, fa izao izy latsaka fahefatra ao amin’ireo Top 10. Na izany aza, mbola “lafo vidy” izy.
Fahadimy, ilay Frantsay, i Antoine Griezmann, ao amin’ny Atletico Madrid, 150,3 tapitrisa euros. Fahenina, i Luis Suarez, ao amin’ny FC Barça, 140,8 tapitrisa euros. Fahafito, mbola Frantsay, i Paul Pogba, milalao ao amin’ny Manchester United, 134,3 tapitrisa euros. Fahavalo, i Gonzalo Higuaín, ao amin’ny Juventus, any Italia, 120,2 tapitrisa euros. Fahasivy, i Eden Hazard, mpilalaon’ny Chelsea, 117,2 tapitrisa euros. Fahafolo, i Paulo Dybala, ao amin’ny Juventus ihany, 115,3 tapitrisa euros.
Nahagaga ny maro ny tsy nahatafiditra anisan’ny Top 10 an’i Cristiano Ronaldo. Laharana faha -11 izy, 112,4 tapitrisa euros. Henjehin’ny fitsarana any Espaina i CR7 noho ny raharaha hosoka amin’ny hetra. Miakatra kosa izao ny lazan’ilay Frantsay, i Kylian Mbappé, tanora indrindra 18 taona, ao amin’ny Monaco, 92,6 tapitrisa euros.
CIES * : Centre International d’Etude du Sport, any Neuchâtel, Suisse.